ATN: လေးစားမိသော တိုင်းရင်းသားတယောက်
မှန်တာပြောရရင်တော့၊ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ အချိန်အထိ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေကို သူပုန်ဆိုတာမျိုးထက် ပိုပြီး မသိခဲ့ပါ။ နောက်ပိုင်းမှ သူတို့ရဲ့ ဘာလို့ လက်နက်ကိုင် နေရတယ်ဆိုတာ နားလည်လာပါတယ်။ အကိုတို့လို တွေ့ဖူး ရင်းနှီးဖူးတဲ့သူတွေက ဒီလိုရေးပေးတာ ကျေးဇူး အထူးပါပဲ။
တိုင်းရင်းသားတွေကို သူပုန်လို့ဘဲ သိထားခဲ့ရတယ်...
ပြည်ပထွက်လာတော့မှဘဲ ဘာလို့သူတို့ လက်နက်ကိုင်ကြလဲ...သူပုန်ဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ
ဆိုတာ သေချာသိလိုက်ရတယ်...အကို့ရဲ့  အတွေ့အကြုံ
ကို မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူး....
သူပုန်ဒိုင်ယာရီရဲ့ နောက်ပိုင်း မတွေ့ ရတော့တဲ့
တော်လှန်ရေးနောက်ခံ အတွေ့ အကြုံလေးမို့
ပြန်လည်ရေးပေးတာ အရမ်းကျေးဇူး တင်ကြောင်းပြောပါရစေ
အိမ်ကြီးပေါ်မှာ အိမ်ငယ်လေး လာမဆောင်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကား ကတော့ ခုလဲ ပဲ ကျမ တို့ ရင်ဆိုင်နေရပါသေးတယ်..
ကမ္ဘာ့ နေရာ အတော်များများ မှာ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း တှို၊ ကမ္ဘာကြီးက ရွာဖြစ်လာပြီ လို့ ပြောနေကြပေမဲ့.. ကိုယ့်အမျိုးကလွဲ ရင် တခြား လူတွေ ကို အမြင်မကြည်နိုင်သေးတဲ့ လူမျိုးစုတွေ မြန်မာပြည်ထဲ မှာ အများ ကြီးရှိနေပါသေးတယ်..
အထူးသဖြင့် ဗမာ ဆိုရင်ပဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူမျိုးကြီး ၀ါဒပိုင်ရှင်တွေ အဖြစ် မြင်ကြတယ်၊ သူတို့ မြင်တာလဲ အပြစ်လို့တော့ပြောမရဘူး အစိုးရဌာနတွေမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ က ရာထူး တက် နှေးတယ်၊ စစ်တပ်ထဲ မှာ နေရာကောင်း မရ ဘူး၊ ဗိုလ် မှူါ် ထက် အထက်အဆင့်မြင့်ရာထူးရဖို့ အလွန့် အလွန် ခဲယဉ်းတယ်၊ နိုငငံခြား ပညာတော်သင်အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ တန်းစီ ဇယားက နောက်ရောက်တယ် စတဲ့ မကျေနပ်သံ တွေ ကတော့ လျှံနေတာပါပဲ...
ဒီလို တော်လှန်ရေးနောက်ခံ ပို့စ်တွေ များများ ဖတ်ချင်ပါတယ်
တိုင်းရင်းသားတွေက ဗမာစာကို မဟာလူမျိုးကြီးစာဆိုပြီး သဘောကွဲလွဲနေတာတော့ တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ တကယ်တော့ တိုင်းရင်းသားစာတွေ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုသလို ညီမတို့တနိုင်လုံးဆက်သွယ်ဆက်ဆံရမယ့် ဘုံဘာသာစကားတခုကလည်းလိုတာပဲလေ။ အဲဒီဘာသာစကားမရှိရင် ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြောဆို ကြမလဲ။ ကိုယ့်အယူအဆတွေဘယ်လိုထုတ်ဖော်ကြမလဲ။
ကရင် ရှမ်းစတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အလွန်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်...
ဒါဆို..အခု..ပအို့ဝ် ကြီး- လို့ ခေါ်မယ်။း)
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ အဲလို အတွေ့အကြုံလေးတွေ-
တခါတလေတော့ ဘာမှန်းမသိဘဲ မုန်းကြရတာ ဆိုးလွန်းပါတယ်ဗျာ ..
အဖိုးကိုကြည့်ရတာ အင်မတန်ရိုးသားတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်...
သူ ယုံကြည်တဲ့ ပစ္စည်းမဲ့ဝါဒဟာလဲ လူထုအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သူ့ပြည်သူပြည်သားတွေကို ကောင်းစားစေလိုတဲ့ စေတနာကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ယုံကြည်မှုတခု ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိပါတယ်...
ဘယ်ဝါဒကိုပဲ လက်ခံလက်ခံ လူအများကို ကြည့်တဲ့စနစ်ဟာ ထာဝရ အောင်မြင်မယ့် စနစ်တခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်..
အများအကျိုးပါလို့ ပြောပြီး ကိုယ်တဘို့ ကောင်းစားရေးကို ရှေးရှုလုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဝါဒကိုပဲ လက်ခံလက်ခံ အနှေးနဲ့ အမြန် ကျဆုံးမှာ အသေအချာပါပဲ...
အခုလို အရေးတယူပြု ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ အကို အောင်သာငယ်ရေ...
အချိန်ရရင် အဖိုးရဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ က အကြောင်းတွေ ထပ်ရေးစေချင်သေးတယ်...
Better than Very good. I can understand and really interesting.